freedomplow: Zimbabwe opposition leader Tsvangirai to go home
Zimbabwe opposition leader Tsvangirai to go home
HARARE, May 22 (Reuters) - Zimbabwean opposition leader Morgan Tsvangirai said on Thursday he would return home on Saturday ahead of an election run-off against President Robert Mugabe.
Tsvangirai made the announcement to cheers from Zimbabwean refugees sheltering at a police station in Johannesburg after deadly xenophobic attacks. He said he would work to end political and economic crisis in Zimbabwe that has caused millions to flee abroad.
Tsvangirai postponed his planned return to Zimbabwe last week after his Movement for Democratic Change party said it had uncovered a plot to assassinate him. He left Zimbabwe on April 8 to build support for his bid to end Mugabe's 28-year rule.
Posted by freedomplow at 2:03 PM